Nhau - Zvikuru Zvikumbiro zveKutonhora Shongwe
Zvikuru Zvikumbiro zveKutonhora Shongwe
Shongwe dzinotonhora dzinonyanya kushandiswa kupisa, kufefetedza, uye kutonhodza mweya (HVAC) uye zvinangwa zveindasitiri. Inopa inoshanda-isingadhuri uye inovheneka mashandiro esisitimu inoda kutonhora. Zvinopfuura 1500 maindasitiri anoshandisa huwandu hwakawanda hwemvura kutonhodza zvirimwa zvavo. HVAC masisitimu anoshandiswa kazhinji muzvivakwa zvikuru zvehofisi, zvikoro, uye zvipatara. Maindasitiri anotonhoresa maindasitiri akakura kupfuura masisitimu eHVAC uye anoshandiswa kubvisa kupisa kwakapinza mumasisitimu emvura anotonhora anotenderera anoshandiswa muzvirimwa zvemagetsi, mafekitori epetroleum, petrochemical zvinomera, gasi rekugadzira gasi, zvigadzirwa zvekugadzira chikafu uye zvimwe zvivakwa zveindasitiri.
Maindasitiri maitiro uye michina inogadzira yakadai yakawanda kupisa zvekuti kuenderera kunopera kunodikanwa kuti ishande zvakanaka. Iko kupisa kunofanirwa kuve kune zvakatipoteredza. Izvi zviri kuburikidza neyakagadziriswa shanduko yekupisa inova hwaro hweiyo inotonhorera tekinoroji tekinoroji.
Zvinonakidza kuti kunyangwe kutonhorera shongwe kuve zvishandiso zve makumi mavirith zana ramakore, ruzivo pamusoro pavo runogumira. Vamwe vanhu vanotenda kuti kutonhodza shongwe ndiko kunobva kusvibiswa, asi chinhu choga chavanoburitsa kumhepo mhepo mweya.
Mushure memakore mazhinji ekuvandudza kweiyi tekinoroji, shongwe dzinotonhora dzinowanikwa mumhando dzakasiyana uye saizi. Chimwe nechimwe cheichi chinoshanda mune imwe gadziriso yemutoro, chikonzero chakakosha kutsanangura sarudzo dziripo. Ziva kuti kunyangwe paine akasiyana magadzirirwo, iro rekutanga basa rinosara senge rekuparadza kupisa kubva muchivakwa system kana maitiro kuenda kumhepo kuburikidza nekupwa. Heano mamwe mapoka:
A.Mechanical dhizaini kutonhora shongwe
B.Atmospheric kutonhora shongwe
C.Hybrid dhizaini kutonhora shongwe
D.Kuyerera kwemhepo-kunozivikanwa kutonhora shongwe
E.Kuvaka-kunozivikanwa kutonhora shongwe
F.Rakaumbwa kunoratidzwa kutonhora shongwe
G.Kutonhora shongwe kunoenderana nenzira yekupisa kupisa
Imwe yeiyi inogona kutakura shongwe dzinoverengeka dzinotonhora. Semuenzaniso, kuisikidza shongwe dzinotonhora maererano nenzira yekudziya kupisa kunopa nzira nhatu: Shongwe dzekutonhora dzakaoma, Vhura maseru ekutonhora wedunhu uye Yakavharwa redunhu kutonhora shongwe / inodziya inotonhorera shongwe.
Kutonhoresa shongwe pamwe kazhinji kunodhura-kunoshanda kutonhodza kwemaindasitiri zvichienzaniswa nezvimwe zvingasarudzwa, asi kugona kunetsa kunogona kuve kudzikisira. Kuongorora kugona kwechinhu kwakakosha sezvo kuchisimbisa zvinotevera:
►Kuderedza kunwa mvura
►Yakawedzerwa hupenyu hwehupenyu hwekushandisa
►Yakaderedzwa mashandiro emitengo
Kuchengeta iyo inotonhorera shongwe ichimhanya zvakanaka, zvinhu zvitatu zvakakosha: nzwisisa mhando yekutonhora shongwe yauri kushandisa, shandisa makemikari nenzira kwayo uye uteedzere pasi system kurasikirwa nemvura.
Iyo inotonhorera tower system yakajairika mumaindasitiri mazhinji, mukuru pakati pavo iri simba, vekutengesa, HVAC nemaindasitiri. Mune iyo yekumisikidza maindasitiri, iyo system inoramba kupisa kubva kumachini, kupisa moto zvinhu pakati pezvimwe zviwanikwa. Kunyanya, maindasitiri anotonhoresa maindasitiri akajairika mune zvinogadzira chikafu, peturuleum mafekitori, gasi rechisikigo uye petrochemical zvirimwa.
Zvimwe zvinoshandiswa mumaindasitiri:
►Mvura yakanyorova mhepo compressors
►Plastic jekiseni & furidza Kuumbwa muchina
►Die vachikanda muchina
►Refrigeration uye chilling chirimwa
►Anodizing maitiro chirimwa
►Simba rekugadzira magetsi
►Mvura yakanyorova masisitimu emhepo uye VAM michina
Kusarudza mhinduro inotonhorera mhando yekutarisisa mutengo, nzvimbo, ruzha, mabhiri emagetsi uye kuwanikwa kwemvura. Kana iwe usina chokwadi kuti ndeupi muenzaniso waunoda, ndapota taura nesu kuti utungamirirwe nerusununguko.